दूध गाउँमा फालाफाल, बजारमा हाहाकार ! - Lekbesi Khabar
दूध गाउँमा फालाफाल, बजारमा हाहाकार !
महोत्तरी: रतनकुमार महतोको गोठमा चार वटा भैंसी थिए। लकडाउनले भैंसीलाई दानापानी जुटाउन समस्या भयो। उनले बाध्य भएर घाटा लगाई दुई वटा भैंसी बिक्री गरे। भैंंसीको दूध डेरीमा उनलाई पुर्‍याउन कठिन छ। उनीसँग अहिले गोठमा दुई वटा दूधालु भैंसी छन्।
‘लकडाउनले बजार बन्द भयो। पशु आहार दाना पाइएन। भुसा, पराल छैन। भैंसी पाल्नै सकिएन। बाध्य भएर सस्तोमै भैंसी बिक्री गर्नु पर्‍यो’, उनले भने। महोत्तरीको गौशाला नगरपालिका–१२ परोरियाका दूध किसान रतन कुमार भन्छन, ‘दूध लिएर डेरी सम्म आउँदा प्रहरीले कुट्छ , मोटरसाइकल खोसिदिन्छ। धेरै अप्ठ्यारो भयो।’
विश्वव्यापी रुपमा फैलिएको कोरोना भाइरसको महामारी रोक्न भन्दै सरकारले लगाएको लकडाउन तीन सातमा पुगेको छ। ‘घरमा दूध फालिन्छ, डेरीमा बिक्री गर्न किसानले सकिरहेका छैनन्’, उनले भने।
शनिबार बिहानको ८ बज्दैं थियो, बर्दिबास बजार पुग्दा सुनसान थियो। शनिबार र बुधबार भिडभाड हुने बिहानी हाट सुनसान देखिन्थ्यो। तरकारीले बजार नपाएको भन्दै किसान चिन्ता जाहेर गर्दै थिए, उपभोक्ताले सागसब्जी नपाएर हाहाकार भएको बताउँदै थिए। याे खबर अन्नपूर्ण पाेस्ट दैनिकमा छ ।
७ बैशाख २०७७, आईतवार ०९:२८ April 19, 2020
जनकपुर सडकमा पैसा फाल्दै हिड्ने महिलामा कोराना पोजेटिभ देखिएपछि…
नेपालमा कोरोना निर्मूल नभएसम्म लकडाउन !